Irish Whiskey Umlobi uStuart McNamara uhambela Loop Whisky Isitolo e Dublin Airport ukuzama futhi ubuyekeze Tullamore namazolo Cider Cask Irish Whiskey.
I Loop Whisky Izitolo ekhatsi Dublin Airport, ngaphandle kokungabaza ukudlala indima ekulu show bezinhlamvu whiskey Irish kuzithameli omkhulu wamazwe omhlaba. Dublin Airport traffic kukhule 8% ngonyaka odlule ukuze phezu 21 abantu abayizigidi ezingu-futhi cishe njalo nelilodwa lala abagibeli ziyobe sezidlulile ngokusebenzisa noma izitolo Loop emangalisayo Whisky, ngodondolo yabo onolwazi friendly, eziningi zazo ezingase zibe futhi amalungu Dublin Airport Whisky Umphakathi. Khuluma mayelana Umsebenzi Dream!
Kudlulwa Terminal 2 endleleni yami emuva Brussels ngesonto eledlule ngaqaphela i whiskey ezengeziwe ukuma ngaphandle main nogologo esitolo futhi wajabula kakhulu lapho ebona ke inabasebenzi (noma "Ladied") Jean, ngubani nengxenye eyodwa "uColette Jean Whisky Sisters" baye kudala ezimbili engcono Whisky Ambassadors lo Irish Whiskey Industry sika. Kodwa ke, uma ucabanga ngakho, nezilaleli ezingu 21 Million, ufanelwe kuphela Ambassadors engcono kakhulu ukuthi Irish Whiskey Industry has!
Jean ukuthi abansundu ezikhundleni eziphezulu ngegama elisha Pop-Up Thenga Tullamore namazolo ne kakhulu ukuma kokuba enikelwe Tullamore namazolo sika entsha ethokozisayo Cider Cask sekugcineni whiskey okuyinto itholakala kuphela Global Izikhangibavakashi Stores nokudayisa ezifana Dublin Airport noma Tullamore namazolo Isivakashi Semihlangano ekhatsi Tullamore edolobheni.
Incwadi ethi A History ezisheshayo Tullamore Dew
Njengoba abaningi benu bazi, Tullamore namazolo (amazolo imele Daniel E. Williams, umphathi wabo edume kunazo distillery e-1890) kuyinto Whisky Irish ihlukile ngoba siyinhlanganisela kathathu distilled Irish Single Malt, Single Embizeni Namanje futhi Grain whiskeys. I Tullamore namazolo brand isiphelile manje 185 ubudala futhi ingenye whiskeys eyaziwa kahle kakhulu futhi ethandwa Ireland, ikakhulukazi izwekazi laseYurophu.
Tullamore namazolo, njengamanye Whisky amalebula eziningi Irish ahlupheka isigamu kwekhulu lama-20 yesibili. Lapho distillery yasekuqaleni eyayihunyushwe iphethwe yi- D.E. Williams, ivaliwe ngawo-1950, ukukhiqizwa ukuthi outsourced ukuba Amandla Whisky and Distillers Irish lapho Ngenhlanhla sha abasinda futhi bachuma, ikakhulukazi e-Germany kanye izwekazi laseYurophu. Le mpumelelo kwaholela ekutheni zitholwa Scotch Whisky giant uWilliam Grant & Amadodana base Tullamore namazolo Fan sibamba umoya wabo. Bona Kwakungadingeki bakhathazeke. Ukuze endaweni iminyaka embalwa emifushane, ne-investimenti ye € 35 Million, Izibonelelo kusungulwa nethimba ashukumisayo wakha isimo entsha distillery art e Tullamore ku Irish Midlands labavulekela September odlule. ukukhiqizwa kokuqala kule distillery entsha ye Embizeni Namanje futhi Malt nogologo izingxenye Tullamore namazolo. Grain nogologo namanje ekhiqizwa ongekho esizeni, kodwa ngiyaqonda ukuthi kungaba khona izinhlelo ukufaka Ikholomu noma Coffey Namanje esikhathini esizayo esiseduze waphinda ukuvumela zonke izingxenye Tullamore namazolo ukuba distilled elulwimini lwabo edolobheni. Phela, the Pot Stills Nomoya Safe efanekisa sihloko yami ku "Indlela Whisky Irish is Made"Sonke kusukela distillery entsha Tullamore namazolo sika.
Cider Cask Tullamore Dew Whisky ukubuyekeza
Tullamore namazolo Brand Ambassador John Quinn nge Tullamore namazolo Cider Cask Whisky
Ngakho, kuthiwani Cider Cask Tullamore namazolo?
Nakuba evamile Tullamore amazolo wavuthwa eKentucky Bourbon neSpanishi Oloroso emiphongolweni ubudala, Tullamore namazolo Cider Cask unikezwa i nokuvuthwa isigaba ezengeziwe. John Quinn ngubani Tullamore namazolo komhlaba Ambassador, uchaza:
"Ukwakha Tullamore D.E.W. Cider Cask Qeda, thina akhethiwe apula ayetholakala, okuyinto babaziwa kanjalo ngaleso asanda agxishiwe labetibambile emiphongolweni ye-oki ezinyangeni ezimbalwa. Njengoba cider isibilile, amanothi Ukuthoma okwamanje amnandi wafaka le emiphongolweni Bourbon. Sabe siphoned zonke cider fermenting, esikhundleni salo zifake Tullamore D.E.W. whiskey Irish i ezinye izinyanga ezintathu nokuvuthwa. "
uJohane uyaqhubeka, "Kanye ngonyaka, lokhu fake olinganiselayo, umoya eyinkimbinkimbi kudalwa lapha inhliziyo Ireland, yizikhathi i izikebhe Irish yezinkathi ezithile ngekuluhlunga enkulu. Ngokuhlanganisa leli siko wakudala ka cider ekwenziweni - okuyinto kuhlehlela emuva 1600s - ne Tullamore D.E.W. sika 185 neminyaka nobungoti nogologo ekwenziweni, siyakholwa ukuthi lokho esiye sabhekana ekhiqizwa yinto emangalisayo okuthakazelisayo -. umkhiqizo nalokho kwenele ngempela lapho befuna "
Cider Cask Tullamore Dew Whisky zokuhlolwa Amanothi
Ngakho kuthini ukunambitha like? Jean wathela kimi isilinganiso kusukela ehlukile, elikhulu 1 ilitha ibhodlela.
Ikhala: Ube yiphunga ngokushesha futhi esiqondile apula sibathelela ngokushesha lwemithombo. Ikhala iqinile futhi emnene kulokukhanya futhi usentekenteke.
Nambithani: Konke mayelana lwemithombo lapha ekuqaleni, kodwa ke spiciness ebhodweni namanje ukhahlela ku ophahleni umlomo. I-apula sisekhona ngemuva, kodwa ngaphezulu wokushiswa toffee apula njengoba kwesihlahla se-okhi, i-apula, imbiza namanje futhi lwemithombo zonke ekulweni ukunakwa kwakho. Into ebaluleke lapha ukuthi lusebenza. Boy Isebenza! Yilokhu Tullamore namazolo imayelana futhi kungcono futhi kungani Tullamore namazolo kuyinto nogologo ukhiye we nogologo Wabasaqalayo uzame uma ziye kakade usuye wazizwela futhi yayifunda ukubona izingxenye ezehlukene yokusanhlamvu-lwemithombo imisindvo efana Bushmills nokusanhlamvu-imbiza namanje ihlangana like Jameson. Ukuphuza Tullamore namazolo futhi uzoshesha ufunde futhi bakwazi ukunquma ukuthi ingabe fan Malt nogologo noma (njengami) a Embizeni fan Namanje whiskey.
I Qeda: mude, ocebile futhi emnene. Nakuba ekuqaleni kwaba konke mayelana apula kanye lwemithombo, sekugcineni imayelana apula kanye imbiza namanje.
Yinye into engiyicelé benza isaziso ukuthi splash evamile yamanzi mina ngeza ku ingilazi yami yesibili ukuvula siyithululele zami sashintsha phansi kakhulu. Ngabuyela amaconsi ambalwa kunokuba ukusaphazela futhi kwakukuhle. Ngisho oluvumela evamile 40% abv, lena nogologo emnene kakhulu ngempela.
Cider Cask kuyinto umzamo omuhle by Tullamore namazolo. Futhi i whiskey ekahle Irish Whiskey Beginners ngomlomo mnene uzizwe futhi sokuqala kancane elimnandi futhi elinuka isakhiwo ukunambitheka ngobumnene Fusion ocebile konke okusemandleni mayelana ezihlangene nogologo Irish.
Nakuba izici umkhakha Scotch baye Walinga ukusiza ngeminyaka nasemaqinisweni nogologo abaphuza nge overpriced, dumbed phansi nogologo yakhuthazwa ngendlela amabhodlela anemibala, football izinkanyezi emaphaketheni fancy, Tullamore namazolo baye acatshangelwe umkhiqizo ezintsha lomcebo eziyokhanga kokubili ephelele nogologo saqala kanye aficionado.
Tullamore namazolo Cider cask kuyinto umamukeli kubafanele Ukwahlukanisa Pooka Amabili, njengoba like Jameson Black Wemigqomo futhi Black Bush, badlile imiphefumulo, bathatha entry level umkhiqizo wabo Pooka Omunye okuyinto kuleli cala kungaba evamile Tullamore namazolo futhi wasebenza ezinye Pooka Amabili magic ku uwenze ekhethekile kancane extra.
Tullamore namazolo Cider Cask ukubuyekeza
Tullamore namazolo Cider Cask Irish Whiskey ukubuyekeza – Imicabango Final
imicabango Final? Ngicabanga ukuthi Tullamore namazolo kungenzeka ukuthi sibe yakudala entsha ngezandla zazo. iseluleko sami? Agxumeke ke njengoba isiphuzo high for Irish Whiskey Beginners futhi njengoba kumnandi, kodwa okubi, whiskey enemisebenzi! Ngazi ngizobuya incur ulaka amaphoyisa whiskey, kodwa ngingathanda ngokujabula baphuze Tullamore namazolo Cider Cask Lihle, ngamanzi, nge Ice (Yebo, Ngathi-ke!) noma Cocktails. Ngakho ukujabulela nogologo yakho ngendlela othanda ngayo! Summer kulapha futhi Tullamore namazolo Cider cask is a real Summer Whisky!
Ngizobuya zokulandelela lesi sihloko ngalolu emasontweni ezayo nge uthole ukwaziswa okwengeziwe ngokukhulekela Loop Irish Whiskey Izitolo ekhatsi Dublin Airport!
Okwamanje, ukujabulela ehlobo futhi ujabulele Whisky Irish!